Ilu nke izu | KONGOLISOLO
MGBANWEE NA EZIOKWU
Ikike ndi mmadu
Ndi mmadu no n'ihe ize ndu
Okwu nke MAN
Africa-nke na-East geo
Akwụkwọ & Eke
AHUIKE & UZI
Mmanya na Mkpụrụ
Iji chefuo mkpọrọgwụ ya ma bufee ụkpụrụ ya, ọ bara uru ịjụ usoro okpukpe na nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị: "Mmetụta dị njọ nke globalism; ijikọ ụwa ọnụ bụ sistemụ echiche nke ọdịda anyanwụ nke na-ekwu na ya na-ejikọ ụwa niile (n'agbanyeghị nke a abụghị ihe kpatara ya) "
Site na: KongoLisolona: July 18, 2020 00: 50 Enweghị asịsa
Universalism bụ nkuzi igbu onwe ya n'ihi na ọ na - ekpocha akụ niile sitere n'okike ma jupụta ebe niile n'ụwa niile maka uru ...	GỤKWUO
Kedụ ka anyị ga - esi gbochie ndị na - eri anụ ị nweta akụ na ụba anyị? Anyị adịghị ike ugbu a ma kewaa "Nke a bụ ihe kpatara ihe niile anyị na-agba iche ihu ndị na - edina anyị, ha enweghị mmetụta ọ bụla"
Site na: KongoLisolona: July 4, 2020 00: 45 Enweghị asịsa
Ruo ọtụtụ narị afọ, onye na-eri anyị enyefewo onwe ya oge nile dị ka inweta akụ na ụba anyị. Ornye ma ọ bụ ihe na-eme ka mfe a nweta? Ọ bụ nke anyị ...	GỤKWUO
Mmetụta nke asụsụ asụsụ Afrịka oge ochie na asụsụ ndị Europe: ngbanwe oge ochie nke okwu asụsụ Egypt, ụwa niile gbanwere ngbanwe nke Greek na Latin ha; yabụ bekee, French, German, Spanish, Italian, na asụsụ niile ndị ọzọ sitere na ezinụlọ ndị Gris
Site na: KongoLisolona: June 20, 2020 00: 45 Enweghị asịsa
Mgbe ndi Gris wakporo Fero nke ndi Egypt n’agbata site -332 rue 30 nke ugbua, ndi Rome nke asusu ya bu Latin, diri ndi…	GỤKWUO
Zoos, ụmụ mmadụ, obere ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme na-amaghị: n'oge ọchịchị obodo, a mụrụ ọtụtụ ogige ntụrụndụ na mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ "Nke a bụ ihe a na-amaghị ma ọ bụ zonahụ ọha na eze"
Site na: KongoLisolona: June 6, 2020 00: 50 Enweghị asịsa
Site na okike, umu anumanu nwere oru nke ime ka ndi n’eto eto mara banyere ịkwanyere gburugburu ugwu ugwu, ikpuchi ihe ekere uwa na ichebe umu anumanu. Nnọọ, ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: Mee 30, 2020 00: 45 Enweghị asịsa
Ndị mmadụ na-enweghị akọ na uche akọ akụkọ ihe mere eme bụ ndị na-ebibi onwe ha, ndị mmadụ na-achọ imebi ma ọ bụ na-achọ imebi. Ọ bụ ekele maka oge gara aga, akụkọ ya, ọdịnala ya ...	GỤKWUO
Ndi mmadu na-amata ma na-egosipụta ya site na usoro ihe atụ (ebo na totem ma ọ bụ ọbụna nna nna ya na ụmụ ya) nke na-enye ha ma ọdịbendị ma ọ bụ site na ya ọdịnala anyị na-amata ndị mmadụ.
Site na: KongoLisolona: Mee 23, 2020 00: 50 Enweghị asịsa
Otu ga - ekpebi ịdị ukwuu nke otu obodo site na otu esi emeso ndị adịghị ike ebe ahụ! Okwu a bu “ndi” putara ihe. Nkọwapụta nke "ndị mmadụ" nke Larousse du nyere…	GỤKWUO
Aug08 06: 22
iru mmiri 88%
Hi / le: 26/23 ℃
Hi / le: 29/24 ℃
ihu igwe dị ọcha
Hi / le: 32/25 ℃
iru mmiri: 37
òtù ezinụlọ Aug12
Hi / le: 30/25 ℃
iru mmiri: 47
iru mmiri: 50
Hi / le: 27/25 ℃
iru mmiri: 67
Haiti: "Onye isi Black Republic mbụ", ezigbo ụmụnna nwoke / ndị nwanyị Black / Africa, ọ bụrụ na ụmụnna anyị na Haiti jisiri ike nwere onwe ha na 1804; na-enweghị enyemaka nke onye ọ bụla, ha mara ndị France aka ma merie ndị France iji mepụta Black Republic nke mbu nwere onwe ha mgbe ịgba ohu… (VIDEO)
August 6, 2020 00: 00
Chineke nke Israel ọ̀ bụ onye arụrụala ọ kwara iko na Meri? Mymụnna m hụrụ n'anya, ka anyị gwa ibe anyị eziokwu banyere mmekọrịta dị n'etiti Meri na Chineke nke Israel
August 3, 2020 00: 00
Ọ dịghị onye ma ọ bụ onye ọbụla nwere ike ikwu na ya na Chineke ịgwa ndị ọzọ okwu; Anyị ezughị ike banyere ndị ọzụzụ atụrụ niile ahụ ihere na mmadụ nke Chineke; ha amaghi ihe ha na ekwu, ha amaghi kwa akwukwo nso
July 27, 2020 00: 04
Ememe Yoruba bụ ihe gbasara ememe ndị Kamit; Jean Charles Coovi Gomez, mgbe ọ na-eme nyocha ya, rụtụrụ aka na emume ndị Yoruba Egungun na Nigeria, bụ nnọọ nke a na-eme na ememe Kamit oge ochie (Egypt), nke a kpọrọ "Ntinye nke ogidi Djed"
July 26, 2020 13: 38
John Samuel na 25 Jun na: Otu n'ime ihe ndị Akwụkwọ Nsọ na-ekwekọghị na ya gosipụtara: ebe dị anya n'etiti Egypt na Israel bụ ihe dị ka kilomita 613, mana dịka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, Mozis na ụmụ Israel biri afọ 40 iji wuchaa njem ha ma banye n'ala ahụ a na-akpọ "nkwa"
Enweghị nkwekọ na ebe a. Onye obula dere ihe a nwere echiche ya maka…
Umoja na 29 Mee na: Nchịkọta ndị America megide Onye Isi Ala Jean-Bertrand Aristide (February 2004): ndị America nwere “Ọnọdụ Otu” maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọjọọ niile nke ndị Haiti mgbe ha na-anwa ịkwatu oge ọ bụla ndị isi ala niile jụrụ ịjụ. na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị America ... (VIDEO)
Ndị America chere na ha karịrị ndị ọzọ nsogbu ndị ọzọ ebe…
Krizzi na 10 Mee na: Kedu ihe mere Kanye ji chụpụ nwanyị chọrọ ịlụ ya (ma kpachie Amber Rose) ịlụ Kim Kardashian? N’afọ 2007, e sere foto Kanye West na onye ya na ya chọrọ ịlụ Kim Kardashian "Afọ iteghete gachara, megide nsogbu niile, Kanye West lụrụ Kim Kardashian onye ha mụrụ ụmụ 3"
Nwa ehi ojii a nwụrụ. Onweghi ndi isi ojii choro ya.
Nicole na 27 Apr na: Nkekọ-19: Jizọs ọ̀ kwụsịrị ịbụ nnukwu dọkịta ahụ, dọkịta nke ndị dọkịta? Ndi m huru n’anya, ndi Black / African “Nwa aturu”, mana olee ebe Jisos Kraist gi di, dibia ndi dibia gara? N'ezie, ihe karịrị ndị ụkọchukwu 1034, ndị bishọp na ndị nọn nwụrụ site na nje Corona
Jizọs na-agbasi mbọ ike n'inye ndị ọcha ibe ya ịmepụta ọhụụ nke C ...
NJIKWUTA NA ANA EGO